सबै पूर्वमाओवादीलाई ओलीबाट फर्काएर प्रचण्ड क्याम्पमा बादलको इन्ट्री ! – चितवन मिडिया
सबै पूर्वमाओवादीलाई ओलीबाट फर्काएर प्रचण्ड क्याम्पमा बादलको इन्ट्री !
काठमाडौँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पूर्वसहमति अनुसार नचलेपछि उनीनिकट पूर्वमाओवादी नेता`हरू असन्तु`ष्ट बनेका छन्। पार्टी र सरकारमा पूर्वसहमति अनुसारको जिम्मेवारी र भूमिका नदिएपछि पूर्वमाओवादी नेता`हरुमा स’शंकित बनेका छन्। पार्टीभित्रको जिम्मेवारी बाँडफाँट, राजनीतिक नियुक्ति र वरिय`ताका विषयमा ओलीसँग उनीहरु चिढिएका हुन्।
पूर्वसहमति अनु`सार पाएको जिम्मेवारी समेत खोसिने अव¥स्था आएपछि पूर्वमाओवादी नेताहरू परा¥मर्शमा जुटेका छन्। सहअध्यक्ष बनाउने शर्तमा ओली समू`हमा पुगेका गृहमन्त्री रा`मबहादुर थापा पूर्वमाओवादी नेता`हरुसँग परामर्श गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीसँग दुरी बढ्दै गएको बेला उनले उर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीलाई भेटेका छन्। उनले आफू`लाई साथ दिन रायमा`झीसँग आग्रह गरेको उनी निकट एक नेताले जानकारी दिए।
गृहमन्त्री थापा`ले पूर्वमाओवादी नेताहरू एक भएर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए। भेटमा उनले रायमा`झीलाई ओली पक्षमा लाग्ने कि पूर्वमाओवादी एक भएर जाने विषयमा छिटो निर्णय लिन भनेका छन्। पूर्वमाओवादी पक्ष`बाट यति धेरै मन्त्री भए पनि पार्टीभित्र भने कमजोर अवस्था`मा रहेको गुनासो रायमाझीको पनि छ। तर, पार्टीभित्र कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा भने उनी अन्योलमा रहेको स्रोत`को दा’बी छ।
पूर्वमाओवादीबाट थापा र रायमा`झीसहित, लेखराज भट्ट, मणि थापा, दावा ता`माङ र गौरीशंकर चौधरी ओली समूहमा लागेर मन्त्री बनेका छन्। पार्टी विभाजनको बेलामा प्रधान`मन्त्री ओलीले गृहमन्त्री रामबहादुर थापालाई सहअध्यक्ष बनाउने र गृहमन्त्री कायम राख्ने वचन दिएका थिए। तर अहिले ओली उक्त वचनबाट पछि हटेका छन्। ओली पूर्वस`हमति अनु`सार नचलेपछि पूर्वमा`ओवादी नेताहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्।
उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट पनि ओलीसँग चिढिएका छन्। पछिल्ला दिन उनले सुदूरपश्चि¥मलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै ओली समूह छोड्न सक्ने सं’केत गर्दै आएका छन्। ‘ओलीले पेल्दै गए उनलाई छोड्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्दैन’ भट्टले सार्वज`निक रुपमै चे’तावनी दिँदै भनेका थिए। भट्टनिकटका नेता-कार्य¥कर्ताले पनि पछिल्लो¥समय सामाजिक सञ्जालमा ओलीवि’रुद्ध अस`हमति जाहेर गरिरहेका छन्।
थापालाई दैनिक जसो नेताहरूले भेटेर आफ्नो पक्षको रक्षा गर्न पूर्वमाओवादी नेताहरुले सुझाव दिँदै आएका छन्। केही दिन अघि उर्जामन्त्री रायमाझीलाई समेत भेटेर उनीह`रूले पूर्वमाओवादीले एकताबद्ध भएर दह्रो उपस्थि`ति जनाउन सुझाव दिएको थापानिकट केन्द्रीय सदस्य राज¥कुमार श्रेष्ठको भनाई छ। उनले भने, ‘नेताहरू एक्लै जाने, मन्त्री हुने गर्दा हामी कमजोर भयौं, पछिल्ला केही निर्णयहरुले सकारात्मक संकेत गरेका छैनन्, यो सच्चि`नुपर्छ, पूर्वमाओवादी एक भएर नजाने हो भने समस्या पर्छ भनेर मैले सुझाव दिएको थिएँ।’
ओली समूहमा रहेका एक जना पूर्वमाओवादी नेताका अनुसार पूर्वसहमति कार्या`न्वयन नहुँदा अन्योलको स्थिति सिर्जना भएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्व¥सहमति कार्यान्वयन नगर्ने स्थिति आए राजनीतिक भविष्यबारेमा नेताहरू गम्भीर भएको ती नेताको भनाई छ। उनका अनुसार सहमति पालना नगर्ने अवस्था बने ओलीको साथ छोड्नेसम्म पनि नेताहरुबीच छलफल भ`रहेको छ।
माघ ६ गते भएको ओली पक्षको बागमती प्रदेशको पुनर्ग`ठन र माघ २५ र २६ गते युवा संघ¥को भेलामा एकलौटी गरेपछि थापा समूहका कार्यकर्ता थप आ’क्रोशित बने। ओली समूहअन्तर्गत बागमती प्रदेशको अध्यक्ष आनन्द पोखरेललाई बनाइएको छ। स`चिव पद थापा पक्षलाई दिने प्रतिब’द्धता प्रधान`मन्त्री ओलीले गरेका थिए। तर, पुनर्गठनका बेला ईश्वर पोखरेलनिकट धादिङका खेम लोहनीलाई सचिव बनाइएको छ।
‘थापानिकट राजकुमार श्रेष्ठ¥लाई बाग`मती प्रदेशको सचिव बनाउने तयारी थियो। तर, अन्तिम अवस्थामा बनाइएन। जसले गर्दा साथीहरूमा निराशा छाएको छ,’ थापा`निकट एक नेताले भने। युवा संघको वि’वादले पनि थापा समूह थप निराश बनेको हो। युवा संघको कार्यसमिति पुनर्ग`ठन गर्दा थापा पक्षले आफूहरू पेलिएको महसुस गरेको छ। युवा संघको वि’वाद अझै मिलेको छैन। थापानिकट केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले भने, ‘देशभर नेटवर्क बनायौँ तर युवा संघ लगा¥यतमा एक`लौटी भएपछि साथीह`रूमा नि’राशा छाएको साँचो हो।’
थापा समूह केन्द्रीय समितिमा पनि अत्यन्त कमजोर छ। ओलीले घोषणा गरेको एक हजार पाँच सय एक जनाको केन्द्रीय समितिमा थापा पक्षका केन्द्रीय सदस्य २२ ज`ना मात्र रहेको ती नेताले बताए। ओलीले पूर्वमाओवादी नेताहरूलाई प्रतिबद्धताअनुसारको जिम्मेवारी र विश्वास नगरेपछि उनी¥हरू चिढिएका हुन्। पार्टी विभाजनका बेला आफूलाई साथ दिँदै आएका नेता`हरू सबै प्रचण्ड-नेपालतिर नै छाडेर ओली समूहमा ला`गेका थापाले तल्लो तहका कार्यकर्तालाई आफूतिर तान्न पद दिलाउने बाचा गरेका थिए। तर, अहि`ले एक जनालाई पनि बाचाबमोजिमको जिम्मेवारी उनले दिन सकेका छैनन्।
‘बादल दाइले जसरी पनि मिलाउँछु भन्नुहुन्थ्यो,’ थापानिकट एक नेताले भने, ‘तर, नतिजा अर्कै आयो। यसले आशंका जन्माएको छ। सबै कुरा टुंगिस¥केपछि उहाँले कसरी मि`लाउनु हुन्छ ?’ ७७ वटै जिल्लामा गठन गरिएको भूमि सम¥स्या समाधान आयोगको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यमध्ये एक पद आफूले पाउनुपर्ने थापाको अडान थियो। त्यसैअनुसार उनले ७७ वटै जिल्लाका नेताहरूको नामावली पठाएका थिए।
तर, एक दुई जनाबाहेक कहीँ पनि थापा पक्ष`का नियुक्त नभएको श्रेष्ठले बताए। ‘प्रतिब¥द्धता जनाएको कुनै पनि स्थान नपाउने भएपछि साथीहरू कता कता लाग्छन् थाहा छैन। साथीहरूले गुनासो गरिराख्नुभएको छ,’ केन्द्रीय सदस्य श्रेष्ठले भने। त्यसमाथि ओलीले वामदेव गौतमलाई गृहमन्त्री बन्न प्रस्ताव राखे`पछि थापाको समूहमा निराशा बढेको उनीनिकट नेताहरूले बताउँछन्। गौतमले सो प्रस्ताव माने भने थापाले गृहमन्त्री पद छाड्नुपर्ने हुन्छ। जसका कारण थापा अझ स’शंकित बनेको हो।
तर, गृहमन्त्री थापा अहिले नै ओलीसँग भिड्ने अवस्थामा नरहेको उनी निकट केन्द्रीय सदस्य नवीन रोकामगर बताउँ`छन्। ‘अहिलेसम्मको गतिवि¥धि हेर्दा पार्टीभित्र पेलिएको भन्ने केही प्रश्न उठेको छ। तर, परिस्थिति नभड्कियोस् भनेर अहिले नै आमनेसामने नभइ संयमता अपना¥एको मात्र हो,’ उनले भने, ‘आमने~सामने गर्दा कतिवटा पार्टी बनाउने ? अहिले पार्टीभित्र प्रावि¥धिक समस्या भएका छन्। मिलाउन सकिन्छ र मिल्छ।’ risingdaink
‘दाहाल-नेपाल समूहलाई बेवास्ता गरे अर्को द्वन्द्व’
खुशीको खबर : अमेरिकी अ`न्तरीक्ष यानले गए राती मंगल ग्रहमा अवतरण गरे लगत्तै महाबिर पुन द्वारा `मिना´ रोबट बनाउने घो`षणा